Blogger Haven yeBlack Hat SEO | Martech Zone
Blogger Haven yeBlack Hat SEO
Svondo, Ndira 11, 2009 China, Gumiguru 29, 2015 Douglas Karr
Shamwari yakanaka uye chipangamazano, Ron Brumbarger andiisira tsamba mangwanani ano aine chinongedzo chinokanganisa kublog iri paBlogger yakauya pane mamwe maGoogle Alerts emamwe mazwi akakosha aaitevera. Ini handizodzokore mazwi akakosha pano, sezvo ini ndisingade vashanyi vangu vachidzokera kumashure kana kushanyira iyo blog, asi zvakawanikwa zvainetsa kwazvo. Hechino chikamu chemavara kubva kublog chandakawana chakabatana ne:
Iyo URL uye zita reblog zvinoita kunge rakanyorwa neimwe nzira kuitira kuti musiki akwanise kuteedzera zvawanikwa. Inosanganisirwa mumapostori ndeyechitatu bato zvemukati zvakasaswa nemavara mazwi akakosha - zvinoita kunge kuyedza kiyi kiyi kuwanda Zvakare, kune backlinks kune mamwe mablog ari kuyedza mamwe mazwi akakosha… iyo nzira inoenderera nekuenderera mberi nekuenderera.
Iyo blog iri mumubvunzo hairatidzike kunge iri kuba chero chero zvemukati, kungo dabbling mune kumwe kuyedzwa kwemamwe makiyi ekutsvaga mazwi nemitsara. Chimwe chikonzero ichi chinotyisa ndechekuti ivo pamwe vari kuyedza kuitira kuti vagone kuverenga maitiro ekukunda iwo mazwi mune injini dzekutsvaga. Ndakarega Ron achiziva ndikamutumira link kuti Blogger's Spam Blog yekuzivisa fomu; ndinovimba ichavharwa pasi nekukasira pamwe nemamwe mablogi ane hukama ari kubatanidza nekubva kwavari.
Ini handisi kushamisika kuti kune vepamhepo kunze uko vari kuyedza nenzira idzi. Ndiri kushamisika, zvakadaro, kuti izvi zviri kuitika pasi chaipo peGoogle mhino! Matt Cutts ari kukumbira mamwe mazano pane izvo Google yaanofanira kugadzirisa webspam muna 2009 - pamwe yavo pachikuva inofanirwa kuve yekutanga kukoshesa!
Ndatenda nekundizivisa uye kunyora nezve uyu Ron! Ron ndiye mutungamiri weBitwise Solutions, firimendi yekutanga muno muIndipolis inoita rimwe basa rinoshamisa munyika Microsoft Sharepoint kuvandudza uye kusangana.
Tags: ngowani nhemangowani nhema seongowani nhemablackhat seoBloggerGoogle +matt cuttsMicrosoft Sharepointron brumbarger
Kukura kweTwitter Kunokosha Here?
Webhu Dhairekitori Gal
Jan 13, 2009 pa 2: 32 AM
Kana iwe ukapa Google dhatabhesi simba rekutaura uye ukati "ndiudze nezve Flights kuenda kuChicago" iyo ingangove iri padyo zvakanyanya nezvainozotaura. Pasina munhu anotarisa pamusoro pepfudzi rayo dhatabhesi haina ruzivo.
Yaizowana keyword uremu chaizvo. Yaizowana nhamba yezviito/mazita/mazwi ekumisa zvakanaka. Yaizowana zvimwe zvinhu zvakati wandei zvakaomarara chaizvo asi zvaisamboita zvine musoro kunze kwekunge yaidzokorora izwi nezwi.
Ini handishamiswe kuona izvi zvakare, zvinoita sekunge 2010 ringave gore iro brute force tactics rinotora nzvimbo iyo spammers inongo kurwisa ruzhinji mibairo yekutsvaga muvhoriyamu yakanyanyisa uku Google ichiva dhizaini pakuda musanganiswa wakakwana wemazwi usati wapa peji yekutanga mhinduro. .
Ndinoda kunzwa zvimwe zvezvawawana Doug kana paine chimwe chinowedzera neizvi.
George dw Varimi
Aug 5, 2009 pa 4: 45 AM
Ko mashoko maviri ekupedzisira haaite se spam here???
Blah ndinoda bhurogi rako, ndichadzoka ndozvitarisa nezvimwe….,
ikozvino vane PR3 Backlink hmmmm…
Zvakanaka ini handisi kuzotumira chinongedzo lol ini 🙂
Aug 5, 2009 na12:46 PM
Ini handiise huremu hwakawanda paPagerank - Ini ndinobhadhara zvakanyanya kutarisisa zvakanaka kune mazwi akakosha anokwevera yakawanda traffic. Iyi blog inomira zvakanaka pamazana emazwi akakosha. Ndinoshuva here kuti dai ndine PR9? Chokwadi! Ini handikwanise kusarudza izvozvo, zvakadaro. Ndine TONS ye backlinks uye nhoroondo huru - ndisingazivi kuti nei PR yangu yakaderera.
Thanks RE: iyo SPAM. Ndiri paIntenseDebate izvozvi uye ndichiedza kufunga kuti ndingawana sei aya mazwi echinyakare kuti amake se spam!
Aug 5, 2009 na12:47 PM
Thanks RE: iyo SPAM. Ndiri paIntenseDebate izvozvi - handizive kuti vakazviita sei. Vaenda zvino!